Juan Goytisolo akashaya nezuro pazera remakore makumi masere nematanhatu | Zvazvino Zvinyorwa
June 4 akatiunzira nhau dzinosuruvarisa dzepasirese zvakanyanya uye kunyanya kune nyika yekunyora, kubvira Juan Goytisolo akashaya aine makore makumi masere nematanhatu yakura muguta reMarrakech. Uyu munyori ndewe Spanish yekuyedza nhoroondo yemakumi matanhatu inomiririra mabasa senge "Campos de Níjar" (1960) kana "La Chanca" (1963) iyo yakavezwa mukati mehunhu chaihwo. Mamwezve akawanda enganonyorwa ekuedza akadai se "Zviratidzo zvekuzivikanwa" (1966), uye vamwe maari kuyedza kurerutsa zvese zvine chekuita neakadzvinyirirwa vashoma uye tsika, kunyanya vechiMuslim, semubasa rake. "Kurevererwa kwa Count Don Julián", rakabudiswa mugore ra1970 kana "Makbara", 1980.
Juan Goytisolo akapihwa iyo Cervantes Mubairo muna 2014, iyo inosiyaniswa nekuve inonyanya kukosha yetsamba muchiSpanish. Aigara muMarrakech, kwaakafira, kubvira 1997, kwaakaenda kunogara nemhuri yaAbdelhadi, shamwari uye waaimboshanda naye. Ikoko, mukugara kwake kose, akaedza kuona kuti guta raive nezvose zvaimunetsa kurudyi, uye pakati pemabasa ake, anozivisa kuti Plaza Yamaa al Fna, pakati peguta, yakaziviswa. "Isingaonekwe Tsika Yenhu Yemunhu" mugore 2001.
Aivewo chikamu che Vanyori Vepasi Pese Paramende kuwedzera pakuve chikamu chevatongi veUNESCO basa rayo raive rekusarudza hunyanzvi hweiyo Isingaonekwe Nhoroondo yeVanhu (pakati pevamwe), pamwe nekuve nhengo inokudzwa yeUnited of Vanyori veMorocco (UEM) kubvira 2001.
Seyetsamba yekupedzisira tinokusiira iwe neimwe ye akatanhamara mitsara yaJuan Goytisolo:
"Kusabatsira kwekudzingwa uye, panguva imwe chete, kusakwanisa kudzoka."
«Dzidzo yangu yekunyora yaive isina kurongeka sezvo pakanga pasina dzidzo yekunyora panguva iyoyo, asi pakanga paine kudzidziswa kwakasiyana kwazvo. Nekudaro, ini ndakagadzira dzidzo yangu ndichipesana nezvazvino: zvinyorwa zveFrance, zvinyorwa zveItari, bhuku reAnglo-Saxon ... Zvinonzwisisika, gare gare ndakachinjira kumabhuku eSpanish, nekuda kwekusavimba nedzidziso uye nehunhu hwavaida kutidzidzisa. ».
"Ivo 'vanotengesa zvakanyanya' havandibate zvachose, nekuti havaratidze chero chinhu."
"Usashoropodza vavengi vako, vanogona kudzidza."
"Mabhuku akanaka ndeaya anokanganisa muverengi neimwe nzira uye anomubatsira kuwana chimwe chinhu chinomukanganisa, nzanga yedu kana hunhu hwese."
«Ini ndinonzwa kusununguka pavanonditi" munhu asiri grata "pane pavanondipa. Muchiitiko chekutanga ndinoziva kuti ndiri kutaura chokwadi. Muchipiri, nerombo rakanaka zvisingawanzoitika, ndinopokana neni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Juan Goytisolo akashaya nezuro aine makore makumi masere nemasere ekuberekwa
Mvura. 6 novelties uye zvekare zvinyorwa zvine yakakosha mvura